Yakachipa Sheet simbi zvikamu polishing fekitori uye vatengesi | Ouzhan
Izvo zvakajairika zvemashiti simbi yekugadzirisa ndeiyi: kwakakurudzira simbi, simbi isina simbi, tinplate, chitubu simbi, mhangura uye mhangura chiwanikwa, magnesium chiwanikwa, aruminiyamu chiwanikwa inotonhora yakakungurutswa ndiro, inopisa yakakungurutswa ndiro, kwakakurudzira ndiro, electrolytic ndiro, aruminiyamu ndiro, simbi isina chinhu, ndiro yendarira. Inowanzo shandiswa ndeyekutema yemagetsi uye kupisa kwegesi, pamwe ne laser welding, brazing, thermal welding, electron beam welding, putika inoputika, nezvimwe.
Sheet simbi polishing uye kukuya maitiro-tsika chaiyo sheet sheet simbi zvikamu kugadzira
1. Kukwenenzvera ndiko kukwesha pamusoro pechinhu chakaputirwa kana kupfeka firimu ine kukweshera midhiya senge sandpaper, pumice, hupfu hwebwe, nezvimwewo.
2. Kukorobha inzira yekugadzirisa iyo inoshandisa michina, kemikari kana electrochemical mhedzisiro yekudzora kumeso kweiyo workpiece kuwana yakajeka uye inotsvedzerera pamusoro.
Basa re sheet sheet polishing uye kukuya zvikamu
- Mould makorari anotanga anowedzera kupfeka kuramba uye ngura kuramba kweforoma pamusoro, uye kuwedzera hupenyu hwehupenyu hweforoma.
- Mould makorari anogona kunatsiridza iyo chaiyo yeforoma pamusoro, kudzivirira chizvarwa chemabhureki, uye kudzikamisa kuitika kwezvisina kukwana zvigadzirwa.
- For Foroma, makorari kunogona kuderedza nemishonga nebwe uye kuti mapurasitiki zvigadzirwa nyore kunama kure. Deredza kugadzirwa kwekutenderera, kugadzirisa mashandiro ekugadzirisa, uye chengetedza mutengo wemabhizinesi.
- Kune iyo indasitiri yemagetsi, polishing yeforoma inogona kusangana nezvinodiwa zvehunyanzvi hwekuona uye aesthetics yeiyo workpiece kusvika padanho rakakura.
Bhenefiti yaOuzhan's sheet simbi polishing sevhisi
- Yese chaiyo machira esimbi kupora uye kukuya maitiro kunoenderana nekuomeswa kwemhando yepamusoro.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana masampuli echokwadi machira esimbi kupora uye kukuya kugadzira.
Pashure: OEM jira simbi laser yekucheka zvikamu
Zvadaro: Sheet simbi zvikamu polishing zvikamu
Custom kukwenenzverwa yendarira azvikuya zvikamu machine ...
Nhema anodized 6061-T6 aruminiyamu chiwanikwa CNC machi ...